Indawo yokuhlala yesitudiyo yomlando eduze kwaseCircus, enkabeni yedolobha - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yesitudiyo yomlando eduze kwaseCircus, enkabeni yedolobha
Bakı, Nasimi, i-Azerbaijan
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Lala
Phila emlandweni we-Baku! Ifulethi elisesitezi sokuqala sesakhiwo somlando (kusukela ngo-1890) enophahla oluyi-5 m.high olulungiswe lwaba yi-studio loft enekamelo lokulala phezulu iyindlela enhle kakhulu yabantu abadala abangu-2+ nengane eyodwa phakathi nendawo. Itholakala eduze ne-Baku Circus, phakathi kwemizuzu engu-7 uhamba ngezinyawo ukuya ku-28 may metro/airport express stop/isiteshi sikaloliwe. Imakethe yendawo, igilosa kanye nebhange kukude kakhulu. I-Seaside Boulevard ne-Old City yimizuzu engu-15 ngezinyawo. Umshini wokuwasha, ikhishi, izinto ezibalulekile zokugeza, amalineni akulungele
Uyemukelwa endaweni yami yomlando yesitudiyo! Ngethemba ukuthi uzoyithanda. Isakhiwo ngokwaso sinomlando ocebile: owakhiwa ngo-1890 njengenye yezindlu ezicebe kakhulu zika-Baku njengesibonelo esihle sezakhiwo zakudala ze-Baku "isitayela saseParis", ngo-1917 ngemva kokufika kweSoviet Army futhi yaguqula izwe elizimele likawoyela i-Azerbaijan laba elinye lamaSoviet. IRiphabhulikhi iminyaka engu-70 ngaphezulu, yaba yinkantolo yomphakathi kanye nejele lesikhashana futhi yabamba iziboshwa eziningi (mhlawumbe abantu abafanayo eyabamukela njengezihambeli eminyakeni embalwa ngaphambili). Ngemva kwalokho yahlukaniswa yaba amafulethi amaningi ezakhamuzi zaseSoviet futhi indlu yami yaba ikhaya lomculi odumile ongusomahlaya waseSoviet. Ngemva kokuwa kwe-USSSR yashiywa iminyaka engu-20 ngaze ngayithenga :) Ngendlela indawo yomlilo yasinda kusukela ngo-1890 :))) ngakho jabulela ukuhlala kwakho!
Ikhishi lihlome ngokugcwele ukuze ukwazi ukuthola yonke into: kusukela etiyeni noshukela kuya ezindaweni zokupheka. I-Queen bed yintsha futhi inethezekile. Okokulala namathawula kufakiwe. Eshalofini lezincwadi ungathola amamephu wedolobha neziqondiso zendawo kulo lonke elase-Azerbaijan.
P.S. I-Wi-Fi iyatholakala futhi ayinamkhawulo. Vele ungibuze mayelana nemininingwane lapho ngingena
P.P.S. Ngicela, uma kungenzeka, ngilethele incwadi, uzibuthe nanoma yisiphi ishelufu lezincwadi eziyisikhumbuzo esivela edolobheni lakini. Ifulethi liyawaqoqa :))))
4.84 · 162 okushiwo abanye
Indawo yinhle futhi ungakhohlwa ukuthi enkabeni ye-Baku ungafinyelela noma iyiphi indawo ngemizuzu engu-20 yokuhamba ngezinyawo. Yini esinayo eduze? Inxanxathela yezitolo i-Avenue Viraj enesitolo esikhulu, imakethe yendawo yezithelo nemifino, bese kuba isekisi emaphakathi nepaki yedolobha elihle elineqhwa (imizuzu emi-5 isikhathi sokuhamba), isiteshi sikaloliwe kanye nesiteshi sikamasipala esingu-May 28 kanye nenxanxathela yezitolo edume kakhulu e-Baku "28 mall" enesinema (isikhathi sokuhamba imizuzu eyi-7-10), i-Baku Boulevard ene-funicular, imnyuziyamu ekhaphethi entsha sha, i-Maiden tower ne-Old city iyimizuzu eyi-15-20 kuphela yokuhamba (iqonde nge-BulBul avenue).